The Importance of Ịmara banyere Dị Iche Iche Bitcoin Cards
Gịnị na-Bitcoin debit kaadị?
Bitcoin kaadị bụ kaadị ahụ yiri gị mgbe akụ kaadị. Na-akpọ Bitcoin Debit Kaadị, ndị a kaadị enyere ndị ọrụ ka azụmahịa na na-ghọrọ ka fiat ego ka Euro, Dollars na Pound. Ndị a kaadị ekwe ka ị na fanye na Bitcoin Token Mkpụrụ ego. The BTC na-ahụ ghọrọ ka mgbe ego mgbe na-eme azụmahịa. The n'aka na coinsare ma na BTC ma ọ bụ ya fiat Ẹkot. Ihe Nlereanya nke ndị a na ụlọ ọrụ ndị na-agụnye CoinsBank, Cryptopay.me, Spectrocoin ma ọ bụ Xapo.
Ịgagharị dị iche iche bitcoin kaadị atụnyere.
Dị ka na mbụ na-atụle, ị pụrụ inweta bitcoin debit kaadị si Bitcoin ahịa. Wirex na Xapo-enye gị ohere ịzụta bitcoin kpọmkwem site ha weebụsaịtị. Mgbe maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-adịghị kwuru ebe a, ị ga-mkpa ịzụta ya n'aka ndị ọzọ.
The atọ kasị eji fiat ego eji gafee osisi bụ American Dollars, Ukwu British Pound na European Euro. Ezie na ndị ọzọ na-azụ ahịa na-eji bitcoin ma ọ bụ Russian fiat ego dị ka ụdị nke azụmahịa. Oke nke fiat ego na-adabere na ebe.
The debit kaadị abịa ya ihe ụdị dị ka plastic kaadị na otu aka, na na ọzọ atụ, ha na-egosi dị ka mebere eziokwu, n'ụdị a, i nwere ike jide kaadị, ma na-n'aka na ha na-adị. Ha na-ahaziri na gị njirimara iji hụ na ọ bụ nanị i nwere ike inwe ohere na-emefu ya na bụla ụzọ suut ị. Ndị a virtual kaadị dị naanị online.
The mkpa nke ịmara dị iche iche bitcoin kaadị
Ọ dị mkpa maka ahịa mara iche iche bitcoin kaadị maka a ọtụtụ ihe. Ha gụnyere ndị na-esonụ:
Virtual na Real: Ụfọdụ bitcoin tokens bụ mebere eziokwu. site na nke a, ọ pụtara na kaadị na-adị online. Na n'ihi na otu onye na-eji ya, onye dị otú ahụ kasị aga online n'ihi nzube a. Ịmara ihe dị iche iche bitcoin kaadị-enyere gị aka na-eme atụmatụ na-eme ka mma mkpebi na-eme atụmatụ n'ihu. E nwere otu saịtị na bụ a bara uru na-enye ihe ọmụma na nke a:http://bitcoincardcomparison.com/. N'etiti ya menu nhọrọ na-akụziri gị ihe mebere ma ọ bụ plastic nhọrọ dị.
Ọ na-egosi na ị na-fiat ego nhọrọ dị dabeere na ọnọdụ gị na-iriba-ama.
Ịnye ọnụahịa: Ịmata dị iche iche bitcoin kaadị bụ mkpa maka ịnye ọnụahịa. Onye ọ bụla BTC abịa na ya price ekwu ọnụ ahịa. Nke a na-agụnye ebubo niile metere na bụla azụmahịa, uru nke gị bitcoin na fiat ego, na-na-eri nke na-arụzi. Inwe a ndabere ego enyere gị aka ime ka a ọzọ dabere mkpebi na ihe ị chọrọ.
Mkpa na ozi gafee osisi: bitcoincardcomparison.com bụ naanị n'elu ikpo okwu na-enye gị ọmụma dị oké mkpa na ị chọrọ gafee niile iche nke bitcoin kaadị na enye. Na ịmara nke a ọ bụghị nanị na-enyere aka ime mkpebi, ọ na-azọpụta oge na eliminates ịtụnanya na pụrụ ibilite.
Bitcoin Cards bụ a bara uru na usoro nke na-eme ka azụmahịa na bitcoin cryptocurrency na bitcoincardcomparison.com, bụ gị onye-nkwụsị center maka ihe ọmụma bara uru banyere bitcoin debit kaadị.